ထိလွယ်ရှလွယ်အသားအရေသမားတွေအတွက် သူရဲကောင်း တစ်ဦး (BIODERMA) – YANGON STYLE
ထိလွယ်ရှလွယ်အသားအရေသမားတွေအတွက် သူရဲကောင်း တစ်ဦး (BIODERMA)
Sensitive skinသမားတွေ၊ ထိလွယ်ရှလွယ်အသားအရေပိုင်ရှင် တွေအနေနဲ့ အသားရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းတွေရွေးချယ်ရတာ အခက်ဆုံးပါပဲ။ အမြဲတမ်းသုံးလာခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတောင်မှ ရုတ်တရက် ထိရှတုံ့ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး နောက်ထပ် ဆက်သုံးလို့မရတာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း အရမ်းသတိထားရပါတယ်။ အနံ့ပါတာတွေ၊ ချွေးပေါက်ပိတ်နိုင်တာတွေနဲ့ ဓာတုပစ္စည်းပါတာတွေဟာ sensitive ဖြစ်တဲ့အရေပြားပိုင်ရှင်တွေအတွက် အရမ်းဆိုးကျိုးများပါတယ်။ အသားရေထိန်းသိမ်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ တံဆိပ်တစ်ခုတည်းမှာလည်း အစုံမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် တံဆိပ်တစ်ခု တစ်မျိုးနဲ့ လိုက်ရှာသုံးနေရတယ်။ ဥပမာ မျက်နှာသစ်ဆေးက တစ်ခု၊ အစိုထိန်းခရင်မ်က တစ်ခု စသဖြင့်ပေါ့။
ဒီလို Sensitive skinသမား ပိုင်ရှင်တွေဟာ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ရှာဖွေတဲ့အခါမှာလည်း ခက်ခဲတတ်တာကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ ဒီလိုမဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အရေပြားအထူးကုဆရာဝန် နှင့် အရေပြားအလှအပဆရာဝန် တွေကိုယ်တိုင် ထောက်ခံချက်ပေးထားတဲ့ ပစ္စည်းလေးတစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ BIODERMA Sensibio အမျိုးအစားထုတ်ကုန်တွေဖြစ်ပါတယ်။
သူ့မှာ မျက်နှာသစ်ဆေး၊ တိုနာတွေကနေ အစိုထိန်းခရင်မ်၊ နေလောင်ကာခရင်မ်တွေအထိ အသားရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်း အစအဆုံးရရှိနိုင်ပါတယ်။
BIODERMA ရဲ့ အမှတ်သညာကိုယ်တိုင်ကလည်း ထိရှလွယ်အသားရေပိုင်ရှင်တွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်တာကြောင့် လုံခြုံစိတ်ချရမှုအပိုင်းမှာလည်း ပြောစရာမလိုတာအသေအချာပါပဲ။
အသားအရေထိလွယ်ရှလွယ်သူတွေအနေနဲ့ အဓိက ဂရုစိုက်ရမယ့်အပိုင်းက မျက်နှာသန့်ရှင်းရေးအပိုင်းဖြစ်တာကြောင့် အခုမှာတော့ H2O Micellar Water နဲ့ Foaming Gel တို့ကို သုံးပြီး မျက်နှာပေါ်က ဖုန်မှုန့် နှင့် သေးငယ်တဲ့ အမှုန်ငယ်လေးတွေကို ဘယ်လိုသန့်စင်ကြမလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Bioderma ရဲ့ H20 micellar water နှင့် Foaming gel တို့က အပေါ်ယံအရေပြားအလွှာကို နူးညံ့စွာ သန့်စင်ပေးပါတယ်။
1. ပထမဆုံး Foaming gel နဲ့ မျက်နှာကို သန့်စင်ပေးပါ။ Foaming gel က အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ခြင်းမရှိစေပဲ နူးညံ့စွာ သန့်စင်ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ Foaming gel သုံးတဲ့အခါ မျက်နှာ ပြန်သန့်စင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်နော်
2. Foaming gel သုံးပြီးရင်တော့ H2O Micellar Water ကို တန်းသုံးပေးလို့ရပါတယ်…
3. Cotton pad ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ H2O Micellar water နှင့် မျက်နှာကို သန့်စင်ပေးပါနော်။ မျက်နှာ ပြန်သစ်စရာမလိုတော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေပြီပေါ့။ H2O Micellar water လေးနဲ့ဆို အသားအရေလေး ချော့မွေ့ပြီး စိုပြေစေမှာပါနော်
4. Foaming Gel လေးနဲ့ မျက်နှာသန့်စင်ပြီး H20 Micellar Water လေးသုံးပေးရင် ပိုပြီးတော့ အကျိုးအာနိသင်ရှိပါတယ်နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပထမအဆင့်အနေနဲ့ H20 Micellar water သုံးပြီးမှ Foaming Gel နဲ့ မျက်နှာပြန်သစ်လို့ရှိရင် ရေကနေပါလာတဲ့ အမှုန်အညစ်အကြေးတွေက မျက်နှာပေါ် မှာ ထပ်ကျန်ရှိနေခဲ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြောပြထား​တဲ့ အဆင့်လေးတွေအတိုင်း Double Cleansing ကိုသေချာလေးလုပ်ဆောင်ပေးပါနော်။ ဒီ Bioderma ထုတ်ကုန်လေးတွေနဲ့ဆို အသားအရေလေးကြည်လင်ပြီး ချောမွေ့နေမှာပါ။
အပြင်က ပြန်လာတဲ့အခါ အသားအရေကို အထူး သန့်ရှင်းပေးခြင်းအားဖြင့် အသားအရေ ထိခိုက်မှုမရှိသလောက်နည်းပါးကြပါစေလိုကြောင်း တောင်းဆုမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။